एमाले महाधिवेशनको मतदान समय आधा घण्टा थपियो
सुर्खेतमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना
आज थप ६ हजार ८२७ संक्रमित, १० जनाकाे मृत्यु
४० क्विन्टल जडीबुटी ट्र्याक्टर सहित दुई जना पक्राउ
बाढी पीडित भन्छन् : ‘न राहत पाइयो न जग्गा रह्यो’
तिन शीर्ष नेता देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता
शुक्रबारकाे साहित्य संगालाेमा “घनश्याम राना ऋतु ”
१. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकाे भन्दै सुर्खेतमा विद्यार्थी आन्दोलित ( फोटो फिचर )
४. प्रदेश सभा सदस्य चढेको गाडी दुर्घटना
६. जिप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु
७. नेपाली सेनाको हवाई सेवा : धेरैको बच्यो ज्यान
८. आज पनि देशभर बदली, केही स्थानमा हिमपात र वर्षा
९. भूकम्पको धक्का महसुस
१०. शुक्रबारकाे साहित्य संगालाेमा “घनश्याम राना ऋतु ”
काठमाडौं– काठमाडौं । सुर्खेत काठमाडौँ एजेन्सी कोरोना नेकपा
१४ मंसिर २०७८, मंगलवार १०:२५ प्रकाशित
नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि चितवनमा मतदान जारी छ । आज बिहान १० बजेसम्म मतदानको कार्यतालिका रहेको थियो । तर, निर्धारित समयमा मतदान नसकिने भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य बाबुराम दाहालका अनुसार हालसम्म १७ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिले मत दिइसकेका छन् । १० बजेभित्र मतदान नसिकएपछि थप आधा घण्टा समय थप गरिएको छ । महाधिवेशनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान भइरहेको छ । सोमबार राति नै मतदान सुरु गर्ने भनिएपनि ढिला गरी मंगलबार बिहानबाट मात्र मतदान सुरु भएको हो ।
​अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यका केही क्लस्टरमा आज मतदान भइरहेको छ । एमालेको नयाँ नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली र भीम रावल प्रतिस्पर्धामा छन् । ६ वटा पद भएको उपाध्यक्षमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रामबहादुर थाप, घनश्याम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली भिड्दैछन् ।
अर्कोतिर ७ सचिव पदमा पनि ओलीले टोपबहादुर रायमाझी, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिस्ट र पद्मा अर्याललाई उम्मेदवार बनाएका छन् । ओलीको यो सूचीमा टोपबहादुर र लेखराज पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । सोही पदमा ओलीको टीम बाहिरबाट नेकपा एमालेका नेता भीम आचार्य र टंक कार्कीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।रातोपाटी बाट
१. सुर्खेतमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना
२. आज थप ६ हजार ८२७ संक्रमित, १० जनाकाे मृत्यु
३. कालीकोटमा पहिलोपटक इँटा उद्योग सञ्चालनमा
४. ४० क्विन्टल जडीबुटी ट्र्याक्टर सहित दुई जना पक्राउ
५. विश्वकप ग्लोबल छनोटको उद्घाटन खेल नेपाल र ओमनबीच हुने
१. मोदीलाई कालो झन्डा देखाउने महिलालाई गोली हानियो
३. माघ १५ सम्म विद्यालय बन्द गर्न सिसिएमसीको सिफारिस
४. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकाे भन्दै सुर्खेतमा विद्यार्थी आन्दोलित ( फोटो फिचर )